Tonga avy amin'io fanafohezana io aho hahatsiaro ireo tombony lehibe efatra amin'ny fampiasana aterineto;
Ny vohikala manetry tena no tena fototry ny fanentanana ara-barotra an-tserasera, ny teknolojia azo ampiasaina amin'izao fotoana izao, izay azo ampidirina ao amin'ny tranonkalanao, dia hamela azy hanao asa maro ho an'ny orinasanao amin'ny autopilot.
Tianareo ny tranokalanao hanatanteraka andraikitra maro araka izay tratra 24 ora isan'andro tsy misy ny fidirana na ny fisainanao. Amin'io fomba io ihany no ahafahanao manamboatra ny orinasanao amin'ny sehatra ahafahanao manohana anao.
Ity lafiny iray amin'ny tranonkala ity no heveriko ho hafatra manahirana anao. Ireo no tanjona tianao hotratrarina amin'ny fikambanana sy ny zavatra tianao hotsikao any an-trano mba hahalalan'ny olona ny fomba fijerinao.
Tsotra izao ny manamboatra rafitra izay miasa ao amin'ny tranonkalanao mba hamoronana maro amin'ireo fifandraisana eo amin'ny fikambanana sy ny mpampiasa. Angamba ity dia iray amin'ny fampiasana tranokala lehibe indrindra satria manamaivana ny fepetra takian'ny fifandraisan'ny olona eo amin'ny fikambanana sy ny mpampiasa izany raha tsy misy tanjona iray.
Ohatra ny mpampiasa dia afaka misoratra anarana, misafidy ny mpampiasa azy manokana sy ny tenimiafina, avy eo mba hahazo mailaka fanamafisana izay hanomezana alàlana azy ireo hividy e-mail mifototra amin'ny e-mail.
Azo atao ihany koa ny manolotra ny toerana izay ahafahan'ny olona mamorona profiles sy manavao ny sary amin'ny tranonkala. Azonao atao ihany koa ny manolotra fahafahana ireo mpampiasa handefa votoaty vaovao ho an'ny tranonkala ary hampiditra azy mivantana ao amin'ny rafitra, ity votoaty ity dia tsy hiseho amin'ny tranonkala raha tsy efa navoakan'ny administrateur iray.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny lisitry ny mailaka izy ireo dia afaka mandefa mailaka alim-bolana mandritra ny volana na taona.
Ny tranonkala dia tranonkala lehibe izay afaka mizara ireo antontan-taratasy sy sary izay tsy maintsy ataonao fotsiny. Ny famoronana pejy manokana izay lisitra sy manome tahirin-kevitra misy (amin'ny ankapobeny amin'ny format format PDF - PDF) dia fomba tsara indrindra ahafahan'ireo mpiserasera hifandray amin'ny fikambanana ary hamerenana ny mombamomba azy. Ho setrin'ny adiresy imailakao dia omena azy ireo ny fampahalalana sarobidy.
Ny dingana 9 - Manantona anarana sy fampiantranoana